Myanmar News May 7, 2021 at 9:45 am0comments
ShareMay 7, 2021 The Myanmar junta has banned satellite television after imposing severe restrictions on the Internet and media, provoking global rights groups to protest the military’s tightening grip over information flow in the country. The ruling State Administration Council announced this week that anyone using satellite dishes to watchRead More
News January 15, 2021 at 12:16 pm0comments
Shareဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၂၁ M-Media WHO အဖွဲ့ ဝူဟန်သို့ရောက်ရှိစစ်ဆေး ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO က ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေဟာ ကိုဗစ်ပိုးရဲ့ မူလအစကို လေ့လာဖော်ထုတ်ဖို့အတွက် ဗိုင်းရပ်စ်စတင်ရာ ဝူဟန်မြို့ကို မနေ့က ရောက်ရှိလာပါတယ်။ တရုတ်အစိုးရက အဝင်မခံတာကြောင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေ အများကြီး လုပ်ခဲ့ရတာပါ။ ပညာရှင် ၁၀ ဦးပါဝင်တဲ့ အဲဒီအဖွဲ့ဟာ ၂ ပတ်ကြာကွာရန်တင်းဝင်ပြီးနောက် လေ့လာဖော်ထုတ်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ တရုတ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း၊ သုတေနပညာရှင်၊ ဗိုင်းရပ်စ်စတင်ရာ ဝူဟန်ပင်လယ်စာစျေးကလူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှု လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်သလို တရုတ်အစိုးရကပေးတဲ့ အထောက်အထားတွေကိုလည်း သုံးသပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ပီတာ ဘန် အမ်ဘာရက်က ဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်း ခြေခြေမြစ်မြစ်သိရဖို့ အချိန်အတော်ကြာအုံးမယ်လို့ ခရီးစဉ်မစခင်မှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Read More
Myanmar News May 3, 2020 at 12:59 pm0comments
ShareMay 3, 2020M-Media High ranking officers in Myanmar Armed Forces including Commander-in-Chief senior general Min Aung Hlaing have donated 25 percent of their monthly salary to use in Covid-19 prevention, control and treatment measures. Low ranking officers have also participated in the donation with their one day wage. The donationRead More
Myanmar News April 11, 2020 at 1:07 pm0comments
Share11th April 2020M-Media -A group of three Myanmar engineers has inventedaprototype of mini ventilator that could ease breathing difficulties in Covid-19 patients. Invention was made after the group conductingaresearch basic theory of real ventilator. The computer controlled prototype has auto detect system. The group said thatRead More
Myanmar News, News March 31, 2020 at 2:03 pm0comments
Share31st March 2020M-Media -Myanmar government has ordered all four telecommunication companies to block access to more than two hundreds websites including licensed news agencies seemed to contain adult contents, child pornographic contents and fake news. Telenor – Norway based communication company – said inastatement issued on March 30Read More